Archive du 05-nov-2020
Mr Sayda Manana kiraro 200 isa
Mpanakanto manana talenta maro i Andrianifahanana Razafintsalama Miandravola Rojotiana na i Misie Sayda aminny anarana maha-mpanakanto azy.
Hoditra mainny masoandro, atao ahoana?
Aza iodivirana mihitsy ny akora miaro aminny masoandro rehefa migaingaina tahaka izao ny andro. Mila arovana aminny taratry ny masoandro foana mantsy ny hoditra. Raha toa anefa ka sendra mainny masoandro ihany dia misy ny akora natoraly azo hanalefahana izany.
Nanana olon-tiana aho taloha fa efa nisaraka izahay.
Efa te hiaraka aminolon-kafa indray aho nefa tsy hitako izay safidiana. Misy 4 aminizao no te hiaraka amiko, mitovitovy toetra daholo. Mba mila torohevitra.
Sorbet aminny manga
Akora ilaina · Manga 1kg · Voasarimakirana · Siramamy 250g · Rano 25sl
Meghan Markle: nandika ny lalàna ao an-dapa aminny tsy fahazoana mifidy
Voalohany teo aminny tantara ao aminny fianakavianny mpanjaka ao Londres ny fisianny olona iray ao anaty fianakaviana nandeha nifidy.
Te hihena 5kg vetivety
Regime yaourt atao!
Régime hatao ao anaty fotoana fohy kanefa mahavery lanja betsaka ihany ity hatolotra anao ity. Mifototra aminny yaourt izy ity.
Fanabeazana aizana : Maninona no misy tsy mety hanao?
Mirongatra izao ny vohoka tsy iriana, betsaka ny olona no manary zaza etsy sy eroa. Ny olana anefa, rehefa tena dinihina, dia ny tsy fanaovanilay reny fanabeazana aizana no mhatonga izany. Inona marina no sakana anizy io? Hoy ny dokotera.
Fomba fihinanana kôkô, mahasalama
Ny ranona kôkô voajanahary dia azo sotroina avy hatrany. Ny nofony kosa dia azo potehina sy karakaraina, tahaka ny fanamboarana ranom-boankazo.
Valisoa, 15 taona Naolanny « patron »-any dia bevohoka
Ankizivavikely vao 15 taona, antsoina hoe : Valisoa, no bevohokanny « patron »-any, rehefa naolanity farany.
Kaominina Ambodiampana Hovitaina haingana ny « Logement »-nny zandarmaria
Nitsidika ny fanorenana ny « logement »-nny zandarmaria ao amin'ny kaominina Ambodiampana ny governoranny Faritra Analanjirofo.
Andranomena Andapa Tratra ireo jiolahy mpamaky trano
Nampitaraina ny mponina ao Andranomena Andapa ny fisian'ny vaky trano, ka tonga nitaraina tany amin'ny kaomisaria ny mponina.
KARAMANN MPIASANNY CNAPMAD Efa jerenny Ministeranny Fanabeazam-pirenena
Efa eo am-pamahana ny olana sedrainireo mpiasa eo anivonny Cnapmad nanonta ny laza adina CEPE sy BEPC ny Ministeranny Fanabeazam-pirenena aminizao.
Toamasina Miara-mientana tsy hiverenanny Covid-19 intsony
Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly alarobia ny tetikasa " Fandriaka " andiany faharoa izay notarihin'ny goverinoran'ny faritra Atsinanana, tohanan ny UNICEF.
Mandritsara Vono olona, niafara taminny valy faty
Tebiteby sy korontana no niainanny mponina tao Mandritsara omaly alarobia. Araka ny vaovao azo dia nisehoana vono olona mahatsiravina tao amin'ny tananan'Ambalavelona Kianga,
TOERAM-PIOFANANA TEKNIKA Tsy handoavam-bola intsony manomboka izao
Tsy misy handoavam-bola intsony ireo ivon-toeram-piofanana teknika manerana ny Nosy manomboka izao. Ny mba hahafahana manamaivana ny fahasahirananny Ray aman-dReny no tanjona, indrindra taorianny krizy ara-pahasalamana nateraky ny fiparitahanny valanaretina COVID 19 teto amintsika.
Fanapariahana laza adina sandoka Mangataka « session spéciale" ireo ankizy voarohirohy
Mangataka aminny fitondrana foibe ny mba hanaovana fanadinana bakalorea « session spéciale » ireo ankizy telo voarohirohy taminny fanapariahana laza adina sandoka tany aminny faritrAntalaha.
Mahajanga Manomboka ny fizarana ny "kits scolaires"
Toy ireo faritra hafa dia anisanny nisitraka ny "kits scolaires" avy aminny fitondram-panjakana ny fari-piadidiam-pampianarana ao Mahajanga.
«Salon » momba ny Fizahantany anatiny Ny 12 hatraminny 14 Novamba izao
Ho famaliana ny hetahetanireo mpisehatra aminny « secteur privé » dia hisy ny « salon » natokana ho anny fizahantany nasionaly izay ho karakarainny Ministeranny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetrandro sy ny ONTM.
MPANJAKA RABARIOELINA Tsy satro-boninahitri Ranavalona III ilay ho avy
Anio aminny 08 ora sy sasany maraina no higadona eto an-tanindrazana ilay satro-boninahitry ny mpanjaka Ranavalona III rehefa notazonini Frantsay tany aminizy ireo an-taonany maro.
E-Talk Nizara traikefa sy torohevitra mahasoa i Tahina Razafinjoelina
Tahina Razafinjoelina no nivahiny tao aminilay fandaharana E-talk izay karakarainny masoivohom-pirenena amerikanina ho anny omaly.